interview – Gaming Noodle
အနားယူပြီးရင် နည်းပြမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ Topson နဲ့ အင်တာဗျူးအပြည့်အစုံ
FEATURES, INTERVIEWS / By Gaming Noodle
[Unicode] အနားယူပြီးရင် နည်းပြမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ Topson နဲ့ အင်တာဗျူးအပြည့်အစုံ OG အသင်းရဲ့ Dota2ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်သူ Topson ဟာ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ season ရဲ့ ပထမပိုင်းမှာ အနားယူနေခဲ့ပြီး Covid-19 ကြောင့် ပြိုင်ပွဲနည်းပါးချိန်မရောက်မီ ESL One Los Angeles 2020 ကျင်းပခါနီးမှာမှ ပြန်လာခဲ့သူပါ။ မကြာသေးမီကတော့ Cybersport.ru ဟာ အင်တာဗျူးတစ်ခုအတွင်းမှာ Topson ကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားခဲ့ပါတယ်။ မေး။ ။ မင်္ဂလာပါ Topias ရေ။ ဖင်လန်ကို ပြန်ရောက်လာပြီး အခုလို စကားပြောခွင့်ရလို့ ဝမ်းသာမိပါတယ်။ အခုလက်ရှိအိမ်မှာ self-isolation လုပ်ရတာနဲ့ မလေးရှားမှာ တွေ့ကြုံခဲ့ရတာတွေ ဘာကွာခြားမှုရှိလဲဆိုတာလေး အရင်ဆုံး …
အနားယူပြီးရင် နည်းပြမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ Topson နဲ့ အင်တာဗျူးအပြည့်အစုံ Read More »
Team Secret ကနေ MidOne ထွက်ခွာရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ပြောပြခဲ့တဲ့ Zai
[Unicode] Team Secret ကနေ MidOne ထွက်ခွာရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ပြောပြခဲ့တဲ့ Zai နာမည်ကျော် Dota2ကစားသမား Zai ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ Team Secret ရဲ့ အသင်းသားတစ်ဦးဖြစ်သလို ခေတ်အဆက်ဆက်က လူသိများလာခဲ့တဲ့ offlaner တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရုရှားမီဒီယာကုမ္ပဏီ Maincast က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတော့ Zai ဟာ Team Secret အသင်းသားဟောင်းဖြစ်သူ MidOne ရဲ့ အသင်းက ထွက်ခွာသွားရခြင်း အကြောင်းအရင်းကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Zai ပြောသွားခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရင်းများထဲမှာတော့ “MidOne ဟာ အရမ်း အနားယူလွန်းပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်အတွင်းမှာ ခွင့်ဆက်တိုက်ယူပြီး ခရီးတွေချည်း ထွက်နေခဲ့တယ်။ …
Team Secret ကနေ MidOne ထွက်ခွာရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ပြောပြခဲ့တဲ့ Zai Read More »
WePlay! Bukovel Minor ပွဲကို ရောက်နေခဲ့တဲ့ Dendi နဲ့ အင်တာဗျူး”
LeaveaComment	/ INTERNATIONAL, INTERVIEWS / By Gaming Noodle
[Unicode] WePlay! Bukovel Minor ပွဲကို ရောက်နေခဲ့တဲ့ Dendi နဲ့ အင်တာဗျူး 2020 ရဲ့ ပထမဆုံး Minor ဖြစ်တဲ့ WePlay Bukovel Dota2 Tournament ကတော့ အောင်မြင်စွာ ပြီးစီးသွားခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ Gaming Noodle ရဲ့ Preview ထဲကအတိုင်း “Nigma ကို ဘယ်သူတားဆီးနိုင်မှာလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းအတွက် အဖြေကို ရှာမတွေ့ခဲ့ကြပါဘူး။ “Upper bracket is for bi***es” ဆိုတဲ့ Miracle ရဲ့ စကားအတိုင်း Lower Bracket ကနေတက်ပြီး RNG ကို 3-1 နဲ့ အနိုင်ရကာ ဗိုလ်စွဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွင်းမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ …
WePlay! Bukovel Minor ပွဲကို ရောက်နေခဲ့တဲ့ Dendi နဲ့ အင်တာဗျူး” Read More »